विश्वकप फुटसल खेल्न बिहीबार अर्जेन्टिना जाँदै नेपाली टोली ! तपाइलाई थाहा थियो फुटसल के हो ? — Chetana Online
विश्वकप फुटसल खेल्न बिहीबार अर्जेन्टिना जाँदै नेपाली टोली ! तपाइलाई थाहा थियो फुटसल के हो ?
काठमाण्डाै – नेपाल फुटसल सङ्घले अर्जेन्टिनामा आयोजना हुने विश्वकप फुटसल प्रतियोगिताका लागि आज १२ सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ ।
बाह्रौँ संस्करणको त्यस प्रतियोगिताका लागि समीर कार्कीको कप्तानीमा टोलीको घोषणा गरेको हो । नेपाली टोलीका अन्य सदस्यमा दीपेन्द्र रसाइली, वरदान लामा, दिनेश श्रेष्ठ, विशाल थापा, सुजन बलामी, साहिल राना, राजु बुढाथोकी, अनुप राना, गौरव श्रेष्ठ, सञ्जीव तामाङ र ग्रिजेशमान श्रेष्ठ छन् । टोली प्रशिक्षकमा कमल विष्ट छन् । विश्वकप खेल्न नेपाली टोली बिहीबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछ । नेपाल समूह ‘डी’ मा छ । त्यस समूहमा क्यानडा, क्याटलाेनिया (स्पेन) र फ्रान्स छ ।
नेपालले पहिलो खेल यही चैत १८ गते क्यानडासँग खेल्नेछ । दोस्रो खेल क्याटलनासँग यही चैत १९ गते तथा समूहको अन्तिम खेल यही चैत २० गते फ्रान्ससँग खेल्नेछ । समूहको शीर्ष दुई टोलीले क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाउनेछन् ।
विश्वकप फुटसलमा नेपालले ‘वाइल्ड कार्ड’बाट सहभागिता जनाउन लागेको हो ।
के हो फुटसल ?
फुटबल खेलको सानो रुप ‘फुटसल’ अहिले विश्वभर लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । बढ्दो जनघनत्व, वस्ती विस्तार र खुल्ला ठाउँको अभावका कारण शारीरिक व्यायाम गर्न नपाएकाहरुका लागि फुटसल भरपर्दो विकल्प बनेको छ ।
‘खुला ठाउँको अभावले केटाकेटीदेखि वृद्धवृद्धासम्मका लागि ‘फुटसल’ खेल अभ्यास उपयुक्त विकल्प भएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सुरुवातमा काठमाडौंमा केन्द्रित यो खेल अहिले विराटनगर, हेटाैंडा, बनेपा, पोखरा, धरान, चितवनजस्ता प्रमुख शहरमा विस्तार भएको छ । करिव एक वर्ष पहिलेको एक अध्ययन अनुसार मुलुकभर एक सयको हाराहारीमा व्यावसायिक फुटसल सञ्चालनमा छन् । हाल सम्म त्यो भन्दा धेरै भएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
यसलाई कतिपयले ‘फिटनेस सेन्टर’ का रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सन् २०११ मा नवाङ निमा लामाले ठमेलमा एरेना फुटसलको शुरु गर्नुभयो र यो नै नेपालमा स्थापित पहिलो फुटसल हो । ‘सन् २००९ मा थाइल्याण्ड जाँदा घरभित्रै फुटबल खेलेको देखे, पछि थाहा भयो यो त फुटसल पो रहेछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
थाइल्यान्ड, सिंगापुरजस्ता देशमा फुटसल ‘बिजनेस’ धेरै फस्टाएको देख्नुभएका उहाँले नेपालमा पनि फुटसल शुरु गर्ने अठोट गर्नुभयो र लामो सोचविचारपछि ठमेलमा एरेना फुटसल खोल्नुभयो । आफूले थालेको व्यवसाय विस्तार भएकामा खुशी देखिनुभएका उहाँ अझै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मैदान बनाउन नसकेकामा भने दुःखी हुनुहुन्छ । ‘अधिकांश मैदान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनेका छैनन्’ उहाँ थप्नुहुन्छ ।
सन्दीपलाइ ठुलै सफलता : क्यारेलिबन लिगमा महँगो मूल्य, ७८ लाखमा बिक्रि
रेस्लिङ्ग खेल्दाखेल्दै एक रेस्लरको मृत्यु
बार्सिलोनाले खोज्यो मेस्सीको उत्तराधिकारी, अब कसले लगाउला बार्सिलोनाको १० नम्बर जर्सी ?
नेपालको लज्जास्पद हार : अष्ट्रेलियासँग भएको खेलमा ११–१ गोलले पराजित
सन्दीप बने दिल्लीतर्फ सबैभन्दा सफल बलर, स्टाइलिस प्लेयर अफ द म्याचको एक लाख पुरस्कार
सन्दीप लामिछानेको चमत्कार : क्रिस गेलसहित महत्वपूर्ण तीन विकेट लिए
दिल्लीले आज चेन्नईविरुद्ध खेल्दै, सन्दीप पर्लान् टीममा ?